Lane Cove Harbourview House - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNeil
Nandipha umbono omangalisayo weSydney Harbour xa ufika. Indlu yethu yokulala elungele izilwanyana ezi-2* ebanzi iqaqambile, icocekile kwaye inomoya opholileyo enamaziko akhubazekileyo. Kuphela i-8Km ukusuka kumbindi weSydney, ibekwe kwindawo ezolileyo, enezothutho zikawonke-wonke ezilungileyo kunye nokupaka iimoto ezingaphantsi kwe-cover. Ilungele iintsapho ezinebhedi yeNdlovukazi kwigumbi lokulala eliphambili kunye nebhedi enye kunye nebhedi egobileyo kwigumbi lokulala lesibini. Ikhitshi langoku elinefriji, indawo yokupheka, imicrowave kunye nomatshini wokuhlamba izitya. I-WiFi yasimahla kunye ne-Smart TV.
Indlu yethu ebanzi egcinwe kakuhle e-Linley Point, eLane Cove ibonelele ngendawo yokuhlala esemgangathweni yezibini ezitshatileyo kunye neeholide zosapho phantse iminyaka engama-20. Ithatha abantu abadala aba-3 ngokukhululeka, kunye neentsapho ezinabantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-2. Kukho i-Queen bed kwigumbi lokulala elikhulu, kunye nebhedi enye kunye nebhedi egobileyo efanelekileyo kubantwana abancinci kwigumbi lokulala lesibini. Kubantwana abadala ibhedi enye iyafumaneka endaweni yebhedi esongwayo. Ikhitshi isandula ukuhlaziywa kumgangatho ophezulu kunye nezixhobo ezitsha ezibandakanya i-dishwasher, i-oveni eludongeni, indawo yokupheka kunye noluhlu. Kubekwe iikhaphethi ezintsha kulo lonke kwaye umva umjikelo wokupholisa umoya osanda kufakwa. I-cottage ifanelekile kwabo bakhubazekileyo, ngokufikelela lula kwi-cottage, kunye neshawa kunye nezixhobo zangasese ezikhoyo. I-cottage inegadi yangaphambili enelanga enembono yezibuko, kunye nendawo engasemva yepatio ene-BBQ kunye neendawo zokuhlala ezingaphandle ezinembono phezu koMlambo iLane Cove.
*I-cottage yethu "inobubele kwisilwanyana" - izinja ezincinci kuphela ngothethathethwano kunye nentlawulo eyongezelelweyo iyasebenza.
Ubuncinci bexesha lokubhukisha lobusuku obu-5 lisebenza unyaka wonke ngaphandle koNyaka oMtsha xa ziintsuku ezisi-7.
ILinley Point yenye yezona ndawo zintle zasemanzini kwiZibuko laseSydney. Yindawo yokufumana ithuba leFoto kwiibhulorho ezisi-7 zonyaka zijikeleza iZibuko laseSydney. Kukho imilambo entle kunye neendledlana zokuhamba ezikufutshane.
Njengoko sihlala kwindlu eyahlukileyo kwibhloko yomhlaba ekufuphi sikhona ukuze sincede, okanye sinike iingcebiso zabakhenkethi.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-3677-2
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Linley Point